Dhageyso:-Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun riday. | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Dhageyso:-Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun riday.
Radio Gaalkacyo:-Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda oo xafiiska xeer ilaalintu uu ku eedeysay in ay dhac u gaysteen mid ka mid ah xarumaha Shirkada Hormuud.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa sheegtay markii la dhagaystay Marakhaati furka iyo cadaymihii la hor keenay in Askartaan ay galeen dembiga lagu soo eedeyay kuna Xukuntay in ay bixiyaan Lacagtii ay dhaceyn ka saarista Ciidamada xoogga dalka iyo Min 5-sano oo Xabsi Ciidan ah.
Hoos ka Dhageyso codka maxkamada.